Bit By Bit - ठूलो सहयोग सिर्जना गर्दै - गतिविधिहरु
[ , , , ] बेनाइट र सहकर्मियों (2016) अनुसन्धान को एक राजनीतिक अभिव्यक्ति को भीड-कोडिंग मा एक सबै भन्दा उत्तेजना को दावा छ कि परिणाम reproducable हो। Merz, Regel, and Lewandowski (2016) मा manifestifest कार्पस को पहुँच प्रदान गर्दछ। Benoit et al. (2016) बाट आंकडा2पुन: उत्पन्न गर्ने प्रयास गर्नुहोस् Benoit et al. (2016) मेक्सिको मेक्सिको मेकानिकल टर्की प्रयोग गरेर। तपाइँका नतीजाहरू कसरी समान थिए?
[ ] इन्फ्लूएंजानेट परियोजनामा ​​व्यक्तिहरूको स्वयंसेवक प्यानल इन्फ्लुएंजा-जस्तै-बीमारी (Tilston et al. 2010; Noort et al. 2015) सम्बन्धी घटना, घटना, र स्वास्थ्य-सम्बन्धी व्यवहारको बारेमा रिपोर्ट गर्दछ।
InfluenzaNet, Google Flu Trends, र पारंपरिक इन्फ्लुएंजा ट्रैकिंग सिस्टम मा डिजाईन, लागत, र संभावनाहरु को संभावनाहरु तुलना गर्नुहोस र यसको विपरीत।
अनपेक्षित समयलाई विचार गर्नुहोस् जस्तै इन्फ्लुएंजाको एक उपन्यासको प्रकोप। प्रत्येक प्रणालीमा सम्भावित त्रुटिहरू वर्णन गर्नुहोस्।
[ , , ] अर्थशास्त्री साप्ताहिक समाचार पत्रिका हो। मानव गणना डेटा सिर्जना गर्न को लागी कि यदि महिलाहरु को आवरण मा पुरुष को अनुपात समय संग बदल्यो हो।
म्याग्दीमा आठ विभिन्न क्षेत्रहरू (अफ्रिका, एशिया प्रशांत, युरोप, युरोपियन युनियन, लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व, उत्तरी अमेरिका र युनाइटेड युनिभर्सिटी) मा विभिन्न आवरण हुन सक्छ र तिनीहरू सबै पत्रिकाको वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यी क्षेत्रहरु मध्ये एक छान्नुहोस् र विश्लेषण गर्नुहोस्। तपाईंको विस्तृत प्रक्रियाको वर्णन गर्नुहोस् कि उनीहरूले अरूले दोहोर्याउन सक्दछन्।
यो प्रश्न एक समान परियोजनाले प्रेरित गरेको थियो जस्टिन टेनाटो, जोडसोर्सिंग कम्पनी Crowd मा एक डेटा वैज्ञानिक .फ्लावर: "टाइम म्यागजिन वास्तवमा साथीहरू" हेर्नुहोस् (http://www.crowdflower.com/blog/time-magazine-cover-data) हेर्नुहोस्। ।
[ , , ] अघिल्लो प्रश्नमा निर्माण, अब सबै आठ क्षेत्रहरूको विश्लेषण।
सबै क्षेत्रहरूमा तपाईंले के फरक पार्नुभयो?
तपाइँको आठौं क्षेत्रहरूमा तपाइँको विश्लेषणको विस्तार गर्न कति समय र पैसा लेयो?
कल्पना गर्नुहोस् कि अर्थशास्त्रीले हरेक हप्ता 100 वटा फरक आवरण गर्दछ। अनुमान गर्नुहोस् कि कति विश्लेषण र कति पैसा तपाईंको प्रति 100 100 प्रति हप्तामा तपाइँको विश्लेषणको मात्रामा लिन सकिन्छ।
[ , ] त्यहाँ धेरै वेबसाइटहरू छन् जुन कुगले खोल्ने कल परियोजनाहरू होस्ट गर्नुहोस्। ती परियोजनाहरू मध्ये एकमा भाग लिनुहोस् र वर्णन गर्नुहोस् कि तपाईंले विशेष परियोजनाको बारे र सामान्यमा खुला कलहरूको बारेमा जान्नुहुन्छ।
[ ] तपाईंको क्षेत्र मा एक पत्रिका को हाल नै मा एक मुद्दा को माध्यम ले देखो। त्यहाँ कुनै कागजातहरू जुन खोल कल परियोजनाहरूको रूपमा सुधारिएको हुन सक्छ? किन वा किन होइन?
[ ] Purdam (2014) ले लन्डनमा Purdam (2014) बारेमा एक वितरित डेटा संग्रहको वर्णन गर्दछ। यस शोध डिजाइन को ताकत र कमजोरीहरु संक्षेप।
[ ] कम्युनिटी वितरण गरिएको डेटा संग्रहको गुणस्तर निर्धारण गर्न एक महत्त्वपूर्ण तरिका हो। Windt and Humphreys (2016) पूर्वी कङ्गोका मानिसहरूबाट द्वन्द्व घटनाहरूको रिपोर्ट इकट्ठा गर्न प्रणाली विकसित र परीक्षण गरे। कागज पढ्नुहोस्।
तिनीहरूको डिजाइन कसरी बेवास्ता सुनिश्चित हुन्छ?
तिनीहरूले उनीहरूको प्रोजेक्टबाट एकत्रित डेटा मान्य गर्न थुप्रै दृष्टिकोण प्रस्ताव गरे। तिनीहरूलाई संक्षेप गर्नुहोस्। कुन कुरालाई तपाईं सबैलाई मान्नुभयो?
नयाँ तरिका प्रस्ताव गर्नुहोस् कि डेटा मान्य हुन सक्छ। सुझावहरू को भरोसा बढाउन प्रयास गर्नु पर्छ कि तपाईमा रहेको डेटा मा लागत प्रभावी र नैतिक छ।
[ ] कलकलाखानी र सहकर्मी (2013) ले कम्प्युटिटिकल जीवविज्ञानमा समस्या समाधान गर्न नयाँ एल्गोरिदम सफा गर्न खुल्ला कल सिर्जना गर्यो। उनीहरूले 600 उपन्यासहरू प्राप्त गरेका थिए जसमा 89 उपन्यास कम्प्युटिटिकल दृष्टिकोणहरू छन्। पेश्कीहरु मध्ये, 30 ले स्वास्थ्य को मेगाब्लास्ट को अमेरिकी राष्ट्रीय संस्थानों को प्रदर्शन को पार गर्यो, र सर्वोत्तम सबमिशन ले अधिक सटीकता र गति (1,000 पल्ट तेजी देखि) प्राप्त गर्यो।
तिनीहरूको पेपर पढ्नुहोस्, र त्यसपछि एक सोशल रिसर्च समस्याको प्रस्ताव गर्नुहोस् जुन समान प्रकारको खुला प्रतियोगिता प्रयोग गर्न सक्दछ। विशेष गरी, यो किसिमको प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा र अवस्थित एल्गोरिदमको प्रदर्शनमा ध्यान केन्द्रित छ। यदि तपाईं आफ्नो क्षेत्रमा यस समस्याको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्न भने, किन व्याख्या गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
[ , ] धेरै मानव कम्पन्याट परियोजनाहरु अमेजन मेक्सिको टर्कीबाट सहभागीहरूमा निर्भर रहन्छन्। अमेजन मेकेनिकल टर्कीमा कामदार बन्नुहोस् साइन अप गर्नुहोस्। त्यहाँ काम गर्दै एक घण्टा खर्च गर्नुहोस्। यो मानव गणना परियोजनाको डिजाइन, गुणस्तर, र नैतिकता बारे तपाइँको विचारलाई कसरी असर गर्छ?